Ururka Badbaado oo ballanqaaday wax ka qabashada Abaaraha | ururka badbaado
Ururka Badbaado oo ballanqaaday wax ka qabashada Abaaraha
Published on August 2, 2014 by ururkaba · No Comments
Ururka Badbaado ee wax ka qabashada abaaraha iyo gaarsiinta biyaha deegaanada Xarardheere ee gobolka Mudug ayaa waxa uu ballan qaaday in uu si dagdag ah wax uga qaban doonaan burburka deegaanka, isla markaana uu biyo dhaamin joogta ah ka sameyn doono deegaanadaasi.
Gudoomiyaha guud ee ururka Ismaaciil Warsame Cali oo wareysi siiyay radio Muqdisho ayaa sheegay in ay dadaalka arrinkaasi ku jiraan, dhowaanna ay xafiis ka soo fureen magaalada Mombasa ee dalka Kenya, kadib wafdi ka socda golaha sare oo halkaasi booqday.
Ururkan oo ay xubno ka yihiin in ka badan shan boqol oo dhalinyaro ah ayaa waxa uu yahay mid ku tiirsan tabarucaad ay dhalinyaradu iska uruuriyaan, ilaa iyo iminka ma jirto wax kaalmo ah oo uu ururku weydiistay hay’adaha deeqaha bixiyo.
Gudoomiyaha ururka ayaa waxa uu sheegay muhiimadda ururku in aysan ku ekayn xilliga abaaraha oo kaliya, sidaa darteedna ay sii wadi doonaan dadaalkooda gargaarka ah iyaga oo isku tashanaya, sidoo kale ururku waxa uu wacyi gelin u sameeyaa dhalinyarada Soomaaliyeed eeku dhaqan magaalada Nairobi.
Ururada wadaniga ah ee isku tiirsan gaar ahaan ururada dhalinyarada ayaa waxa ay yihiin rajo wanaagsan oo tusaale u ah sida uu iskugu tiirsanyahay shacabka soomaaliyeed, waxaana arrinkaan ku badbaaday kumanaan shacab Soomaaliyeed ah oo dagaallo iyo dhibaato ku habsadeen.